Fandraisana an-tsoratra momba ny volana isam-bolana - 2 volana ⋆
Fandraisana an-tsoratra momba ny volana isam-bolana - 2 volana
⭐Fandraisana an-tsoratra momba ny volan-tseranana BLOGGERS manokana
Salama ry Blogger malala,
Raha tianao ny sary alefanao ao amin'ny anao Pejy Flickr ho hitan'ny mponina an'arivony ao amin'ny Media SL fiaraha-monina.
Ity ny fanoloran-tenanay:
⭐ FANAZAVANA FANAMPINY BLOGGERS manokana⭐
Ity hetsika vaovao ity dia mikendry ny hampiroborobo ny sarin'ireo bilaogera avo lenta ho an'ny Second Life vondron'olona MEDIA SL amin'ny alàlan'ny fantsom-pahitana avo.
Anisan'izany ny serivisy ⭐
⭐ 1 – Hanao fampisehoana video momba ny blôginao izahay
⭐2 - Handefa izahay amin'ny https://media-sl.com/ ny sary farany rehetra apetrakao ao amin'ny pejinao Flickr mandritra ny iray volana famandrihana. Ny sary farany dia havoaka ho azy eo amin'ny tambajotran-tseraseranay rehetra.
https://media-sl.com/social-networks/ + Mpandraharaha 60,000
Ity no fotoana ahafahana manatona mpihaino midadasika kokoa ho anao Second Life blaogy!
3000 $ L isam-bolana ihany!
⭐ Manaiky an'izany farafaharatsiny izahay fisoratana anarana roa volana!
ANARANA BLOGGER *
ny vaovao farany rehetra napetrakao tao amin'ny pejinao Flickr nandritra ny iray volana nisoratra anarana. Ireo vaovao farany ireo dia ho mandeha ho azy ihany koa
Mandritra ny roa volana
Fandoavana amin'ny Paypal
Paypal na Secondlife laharan'ny fifampiraharahana *
mandehana any amin'ny hetsika ny kaonty paypal dia ho hitanao ny fifanakalozana noumero
Fitsidihana anio: 8,581
Ireo mpitsidika anio: 800
Andro farany 7 nitsidika: 77,758
Andro farany 30 nitsidika: 222,618
Andro farany 365 nitsidika: 3,269,603
Total visits: 6,943,575
Total mpitsidika: 1,423,189